AutoCAD, ArcGIS, र ग्लोबल म्यापरमा के नयाँ छ - Geofumadas
अगस्त, 2012 ArcGIS-ESRI, अटोक्याड-Autodesk, नवाचारै
AutoCAD को लागि ArcGIS प्लगइन
ESRI ले ICGAD बाट ArcGIS डेटा हेर्नको लागी एउटा उपकरणको सुरुवात गर्यो, जुन रिबनमा नयाँ ट्याबको रूपमा फाँटिएको छ र ArcGIS लाइसेन्स वा स्थापित प्रोग्राम आवश्यक छैन।
यो संस्करण AutoCAD २०१० लाई AutoCAD २०१२ मा काम गर्दछ, तिनीहरूले AutoCAD २०१ about को बारेमा केहि भनेका छैनन्। संस्करण २०० or वा त्यस भन्दा अघि, २०० सर्विस प्याक १ निर्माण गर्न आवश्यक छ।
धेरै उत्साहित नहुनुहोस्, यसले मानक तहहरू पढ्दैन जस्तै WMS, WFS, एक MXD वा ESRI जियोडाटाबेस छोड्नुहोस्। यसले के पढ्छ यो डाटा अर्काजीआईएस सर्भर मार्फत दिइन्छ, यो स्थानीय नेटवर्क सेवामा, इन्टरनेटमा र आर्कजीआईएस अनलाइन तहहरूमा पनि होस्। हामी मध्ये जो CAD र GIS बीचको दुरी अवलोकन गर्दै आएका छौं, हामी बुझ्छौं कि यो एक महत्त्वपूर्ण पाइला र अपेक्षित सपना हो किनभने AutoCAD ले अर्कीगिसबाट थीम्ड तहहरूसँग आयात वा रूपान्तरण बिना अन्तर्क्रिया गर्दछ।
प्रकार्यहरू आधारभूत हुन्, नक्शा लोड गर्नुहोस्, अलग तहहरू, बन्द गर्नुहोस्, खोल्नुहोस्, पारदर्शी बनाउनुहोस्, क्वेरी ट्याबुलर डाटा। यदि सेवा कन्फिगर गरिएको छ भने, एउटा उद्यम जियोडाटाबेसबाट ट्याबुलर र भेक्टर डाटा सम्पादन गर्न सकिन्छ, तर यो GIS सर्भरमा परिभाषित गर्नुपर्दछ। यसले प्रोजेक्शन, दुबै .Pj फाईल र एकलाई AutoCAD मा परिभाषित गर्न सक्ने पहिचान गर्दछ। एट्रिब्यूट्स पनि सीएडी डाटामा तोक्न सकिन्छ र लिस्पको साथ बीमा अधिक कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछ।
विशेष रूपमा, आधारभूत भए पनि, यो राम्रो प्रयास जस्तो देखिन्छ, किनभने पहिले, जब सम्म तपाईं AutoCAD नक्शा वा सिभिल3डी प्रयोग गर्नुहुन्न, तपाईंले भेक्टर डाटालाई dwg ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ र ट्याबुलरहरू हराउनुपर्नेछ।
र किनभने यो निःशुल्क छ, यो खराब छैन।
AutoCAD को लागि ArcGIS डाउनलोड गर्नुहोस्
ग्लोबल मेपर 14 ले के गर्नेछ
विश्व सेप्टेम्बरको मध्यमा ग्लोबल मेपरको 14 संस्करण सुरू हुने छ, केवल एक वर्ष पछि 13 संस्करण बाहिर आएको थियो। हामी समयमा कुरा गरौं.
यकीन छ कि एक अधिक विशिष्ट लेख हुनेछ, तर हामीले के बिटा संस्करण को डाउनलोड को लागि उपलब्ध छ जो डाउनलोड को लागि उपलब्ध छ, यो नवीनता छ:
ग्लोबल म्यापर १ 13 मा उनीहरूले ESRI जियोडाट डाटाबेस पढ्ने क्षमता समावेश गरेका थिए। अब ESRI आर्कएसडीई, साथै पहिले नै परम्परागत ईएसआरआई फाईलहरू र व्यक्तिगत जियोडाट डाटाबेसहरू लगभग मूल रूपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ। यही MySQL, Oracle स्थानिक, र PostGIS डाटाबेसको साथ गर्न सकिन्छ।
कमान कार्यक्षमता को स्तर मा, एक राम्रो संख्या को अनुकूलन बनाइयो ताकि थोडा विस्फोट भयो सही माउस बटन एक प्रासंगिक पैनल को सामान्य रूट को उपयोग संग या के गरिरहेको छ संग सम्बन्धित गरिन्छ।
डिजिटल भूभाग मोडेलको पीढीमा, जुन व्यावहारिक भएको छ, निर्माणको लागि मेनुको व्यवस्थापन सुधार गरिएको छ समोच्च लाइनहरू, सतहहरु को संयोजन, बेसिन को उत्पादन र अन्य उपकरण।
दुई जमीन सतहहरु र एक सतह को डिम्मिट गर्न को लागी किनारा लाइनहरु को बीच मात्रा को गणना गर्न को क्षमता पनि जोडिएको छ।
क्लाइन्ट स्तरमा वेब फीचर सेवा (WFS) को लागि समर्थन।
CADRG / CIB, ASRP / ADRG, र Garmin JNX फाइलहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ
खोजहरूलाई तहद्वारा अलग गर्न सकिन्छ
आधारभूत अपरेशन्स गर्न यो सम्भव छ कि जीआईएस प्रोग्रामहरूसँग प्राय: जसमा नि: शुल्क रोटेशन, प्यारामिटरहरू परिभाषित नगरीकन फ्लाईमा नभए जस्तै क्याडमा गरिन्छ। लाइनबाट बहु बहुभुजहरू पनि काट्नुहोस्, ट्रिम टाइप गर्नुहोस्, त्यसले फरक पार्दैन कि तिनीहरू समान विमानमा काटेका छैनन्।
प्रतिलिपि पेस्ट म्यानिल्डमा जस्तै गर्न सकिन्छ, तपाइँ के चाहानुहुन्छ चयन गर्नुहोस्, लक्षित तह फेला पार्नुहोस्, यसलाई टाँस्नुहोस् र जानुहोस्।
हामीले यो के छ हेर्नु पर्छ, तर तिनीहरू निर्यात र परिभाषित रिजोल्युशनको क्षेत्रमा आधारित डेटाको बिक्रीको गणनाको बारेमा कुरा गर्छन्।
अनि निस्सन्देही, यो आशा छ कि धेरै नयाँ ढाँचा आउँनेछ, कुन ग्लोबल मापरर लगभग अविश्वसनीय छ, नयाँ अनुमानहरु र डेटाहरु।
यहाँबाट तपाइँ बेटा संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ जुन एक समानांतर संस्करणको रूपमा स्थापित गरिएको छ जुन पहिले नै हामीले स्थापना गरेका छौं।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो Google ड्राइभमा ठूलो फाइलहरू अपलोड गर्दै
अर्को पोस्ट gvSIG Batoví, शिक्षाको लागि gvSIG को पहिलो वितरण प्रस्तुत गरियोअर्को »
Auto जवाफ "AutoCAD, ArcGIS, र ग्लोबल म्यापरमा के नयाँ छ" को जवाफ
जर्ज क्विटरो भन्छिन्:
यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, कार्यक्रमको स्थापनाको साथ मलाई सहयोग गर्नुहोस्।
Givanildo Sosa भन्छिन्:
ब्यूनस: तपाई यो लिंक कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ http://www.youtube.com/watch?v=p0MhE3kSLIY त्यहाँ प्रयोगको एक राम्रो व्याख्या हो (यो अंग्रेजीमा छ)।
नमस्कार, माफ गर्नुहोस्, तपाईसँग डाउनलोड गरेको र यसलाई स्थापित गरेपछि तपाईसँग AurtoCad 2010-2012 को लागि Arcgis को केही पाठ्यक्रम वा म्यानुअल हो तर म यसलाई कसरी प्रयोग गर्न थाहा छैन। मलाई आशा छ र तपाईं मलाई जी मित्रलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ!
नमस्कार, तपाई the 64 बाइट्सका लागि ग्लोबल म्यापर स्थापना गर्न चरण पठाउन सक्नुहुनेछ ... धन्यवाद